निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गर्छ ? यसबारे नेकपाका पीबीएमको पछिल्लो धारणा-Nepali online news portal
चुनावपछि स्थायी सरकार र विकास हुन्छ भन्नु पनि जनतालाई भ्रम दिनु हो मात्र हाे । जनताकाे मुक्ति संसदीय चुनावबाट हैन क्रान्तिबाट मात्रै भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको चुनाव खारेज गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिलाई नेपाली जनताले क्रान्तिकारीहरूको साथमा व्यवहारिक रूप दिंदा ठोस कारवाही तथा घटनाहरूका रूपमा ल्याएका । तर यी कारवाहीलाई लिएर लोकतन्त्रमै खतरा पैदा भएको विश्लेषण गरिँदैछ । त्यसैले के हो लोकतन्त्र ? कसरी बुझ्ने चुनाव खारेजीका कारवाहीलाई ? अनि अब के हुन्छ र गर्नुपर्छ त ? यसबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरौं ।
अन्तमा चुनाव त आउँछ जान्छ । यो दुई दिनको रमाइलोबाहेक केही होइन । चुनावपछि स्थायी सरकार र विकास हुन्छ भन्नु पनि जनतालाई भ्रम दिनु हो किनभने संसारमा देश र जनताको मुक्ति संसदीय चुनावबाट हैन क्रान्तिबाट मात्रै भएको इतिहास छ । जब देश र जनताको पूर्ण मुक्ति हुँदैन तबसम्म शान्ति र विकास त जनतालाई ठग्ने र दमन गर्ने शासकीय हतियार मात्र सावित हुन्छन् । त्यसैले हामीले दलाल राज्यले लादेको गृहयुद्धको विकल्प एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशा अगाडि सारेका छौं । जसको माध्यमले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुन्छ अर्थात समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ ।
जुन क्रान्तिले अहिलेको नक्कली लोकतन्त्रको अन्त्य र वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ । जब वास्तविक जनतन्त्रको स्थापना हुनेछ तब मात्रै त्यो जनतन्त्रको चुनाव साँचो अर्थमा जनताको लागि उत्सव हुनेछ र जनताले बमको सट्टा पटाका पड्काउने छन् ।